Jijjiirama qilleensaa - BBC News Afaan Oromoo
Ministeerri Fayyaa Firaans tarkaanfiin mootummaan fudhate miidhaan kana caalu akka hin dhaqqabne gargaareera jedhan.
Hurricane Dorian: Hobonboleettiin rooba makate lammiilee Bahaamaas shan ajjeese
Ministirri Muummee Bahaamaas Hubert Minnis erga namni du'uu dhaga'anii booda biyyattiin balaa uumamaa kanaan barbadaa'uuf deemti jechuun sodaa qaban ibsan.
3 Fuulbaana 2019
Bakakkaan Polaandiitti afur ajjeesee, 100 madeesse
Balaa kunis irra jireessa kan miidhaa qaqabsiisee Gaara Giewont bakka sibiirratti bu'eetti.
Ummata addunyaa keessaa harki sadii ykn biliyoonni 2.6 kan ta'an biyyoota ''hirrinni bishaanii cimaa'' qaban keessa jiraatu, akka gabaasa guddichaatti.
HobombolleettiinLekima du'a namoota 28'f sababa ta'eera
Kutaa biyya Chaayinaa keessatti hobonboleessa hamaa ka'een miiliyona tokko ol kan ta'an qe'ee isaanii irraa yoo buqqa'an namoonnii 28 lubbuu dhabaniiru.
Obbo Nagawoo Magarsaa: 'Ji'a jaha ofiif, ji'a jaha immoo biyyaafin hojjedha'
Obbo Nagawoo Magarsaa jedhamu. Akka isaan jedhanitti barattoota suuraa kaasuun galii argataniin ofiifi maatii isaanii jiraachisu. Namuu waan irraa maraate qaba kan koo biqiltuu dhaabuudha jedhu. Garuu, innumtuu qormaataaf akka isaan saaxile dubbatu.
Itoophiyaan guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona dhibba lamaa ol dhaabuuf karoorsitee, dhibba sadii ol dhaabuun ''rikoordii haaraa'' galmeesseera jetti. Ofii akkamiin lakkaawamaa ture?
Kaleessa sagantaa biqiltuu dhaabu akka biyyatti gaggeefamerratti namoota hirmaatan keessaa, Naamni wayita bosonni Baalee gubatu dhaAmsinu malee jechuu isaaf mila isaa tokko dhabe irratti hirmaateera.
Uummanni Oromoo mukeen jiran keessaa muka odaatiif iddoo guddaa qaba. Odaan Hooda qaba. Kabaja qaba, galma Abbaa Gadaati waan ta'eef odaan wayyuudha.
Rooba Meeksikoo: Cabbiin meetirs 1.5 furdatu magaalaa Guwaadalahaaraa uwwise
Daandiiwwaan Guwaadalahaaraa cabbiin uwwifamuun konkolaatota ugguree, manneen irraa midhaa geessiseera.
Komishiniin Eegumsa Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Itoophiyaa Saaxilamni faalama qilleensaa Itoophiyaa dabalaa jira jedhe.
"Magaalaan babal'achuun qabeenya uumamaa mancaasaa jira," Dr. Massalee Maariyoo
Guyyaa Baayoo Daayiversiitii addunyaa har'a kabajamu waliin walqabsiisuun sadarkaa qabeenyi lubbu qabeenyyii adda addaa Itoophiyaa irra jiran Daarektera Baayoo Daayiversiitii Dr. Massalee Maariyoo gaafanneerra.
Abijaataa dabalatee haroowwan hedduun birmannaa barbaadu
Haroon Abijaataa waggootii shan keessatti baduu akka danda'u dhihootti himamee ture.
Paarkii Biyyoolessaa Gibee Shalaqootti roobiin 28 guyyoota muraasa keessatti du'an
Paarkii Biyyoolessaa Gibee Shalaqootti roobiin 28 guyyoota muraasa keessatti du'an. Sababni kanaas qoratamaa jira jedhameera.
Barattoota sadarkaa lammaffaa Vetinaam saayikila qillensa nama saayikilicha ofuuf qulleessuu kalaqan.
Balaan ibiddaa Paarkii Biyyaalessaa Gaarreen Baalee gaara Saannatee bosona saatoo irratti qaqqabe osoo hin dhaamiin guyyoota afur lakkoofsiseera. Paarkiin Biyyaalessaa kun yeroo ji'a lama hin guutne keessatti si'a lamaffaa gubachaa jira jedhameera.
Ameerikaa kutaa bulchiinsa Alaabamaatti balaa bubbee hamaa uumameen namootni 23 du'aniiru
Balaa bubbee kanaan namootni dhabaman ammayyuu barbaadamaa kan jiran yoo tahu hanga ammaatti namootni 23 du'aniiru.
Naayjeeriyaa: Magaalaa magariituu gara magaalaa kosiitti geeddaramte
Magaalaan Port Harkoort qarqara laga Niijeeritti argamti.
Akeekkachiifni ogeeyyiin wayita kennamaa jirutii marii ijoon jijjjiirama qilleensaa ittisuurratti xiyyeefate Poolaanditti eegalameera.